Mudaaharaadeyaasha Venezuela oo jidgooyooyin dhigtay - BBC News Somali
Mudaaharaadeyaasha Venezuela oo jidgooyooyin dhigtay
Mucaaradka madaxweynaha Venezuela, Nicolas Maduro ayaa jidgooyooyin dhigay isla markaana sameeyay dibadbaxyo ay ku dalbanayaan doorashooyin xilli xasaradaha siyaasadeed iyo dhaqaale ee dalkaasi ay sii xoogeysanayaan.
Waxay iska diideen baaqii madaxweynaha ee ku aaddanaa dastuur cusub si loo soo afjaro qalalaasaha oo 28 qof ay ku dhinteen.
Maduro ayaa sheegay in tallaabadiisa ay lagama maarmaan u ahayd iska caabbinta qorshe uu shisheeyuhu dabada ka riixayo oo isaga ka dhan ah.
Mareykanka ayaa sheegay in aysan wanaagsaneyn in lagu dheggenaado xukunka, halka Brazil ay ugu yeertay "afgembin".
Mucaaradka madaxweynaha ayaa doonaya in codbixin la sameeyo si meesha looga saaro, iyagoo ku eedeynaya madaxweynaha garabka-bidix inuu sabab u yahay cunto-yaraanta sababtay qalalaasaha.
Maduro ayaa baaqooda diiday wuxuuna soo saaray dikreeto madaxweyne oo abuureysa 500 oo xubnood si dib loogu qoro dastuurka, tan oo ah tallaabo looga awood badan karo golaha baarlamaanka ee ay mucaaradku awoodda ku leeyihiin.
Wuxuu tallaabadan Insiintii ka sheegay isu soo bax ay ku sugnaayeen kumannaan taageerayaashiisa ah.
"Xubnahan ka mid noqonaya baarlamaanka ee uu magacaabay Maduro waa faragelin looga baxsanayo doorashooyinka," sidaas waxaa sheegay Raul Hernandez, oo ah arday 22 sano jir ah. Wuxuu ka tirsanaa 100 qof oo jidgooyo ku sameeynayay waddo weyn oo dhex marta magaalada caasimadda ah ee Caracas.
Maraykanka oo cunaqabatayn saaray madaxweyne ku xigeenka Venezuela
Askari boolis ah oo lagu dilay dibadbaxyo ka dhacay Venezuela
Wiil yar oo mudaaharaadayay oo lagu dilay Venezuela
Venezuela oo wax ka bixisay kharashkii ku baxay caleemo saarkii Trump
Dhanka kale, xoogagga ammaanka ayaa lagu daad gureeyay wadodooyinka iyagoo dibad-baxayaasha dowladda ka soo horjeeda ku buufinayay sunta dadka ka ilmeysiisa.